Dawladda oo baaris u saaraysa xakamaynta ururrada argagixisada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dawladda oo baaris u saaraysa xakamaynta ururrada argagixisada
La cusbooneeyay onsdag 12 april 2017 kl 14.16
La daabacay onsdag 12 april 2017 kl 12.38
Johansson: Wuxuu adkeeyn lahaa dhacdooyinka sida middii Stockholm
Morgan Johansson (S), wasiirka shuruucda iyo Gustav Fridolin (MP), wasiirka tacliinta oo shir-jaraa'id qabtay. sawir: Adam Ihse/TT
Dawladda ayaa u saari doonta baaris degdeg ah sidii loo xaaraantimeeyn lahaa ka mid ahaanshaha ururrada xag-jirriinta, sida ey shir jaraa’id ku sheegeen wasiirka shuruucda Morgan Johansson (S) iyo wasiirka tacliinta Gustav Fridolin (MP).
Xeerka maanta dalka ka jira mamnuucaya in safar loo galo sidii looga garab-dagalami lahaa urur- argagixis iyo sidoo kale in la miisaaniyad geliyo, hase yeeshee aanu sharcigu mamnuucayn in laga qayb qaato urur noocaasi ah.
– Dal-daloolo noocaasi ah ma ahan in xeerka laga helo, sida uu sheegay Morgan Johansson.
– Waxaannu qiimeeyneynaa in aannu xeer noocaasi ah dejin karno, sida uu sheegay. Isaga oo hadalkiisii sii watana wuxuu ku daray annaga oo weliba ogsoon xadka nidaamka ka mid ahaanshaha ururradu uu na xadidayo.
Stefan Johansson oo ah qreen maxkamadda sare ayaa masuuliyad loo saareyinuu howshaa si degdeg ah u guda galo.
Ugu dambeeyn waa in howshaasi uu soo gabagabeeyo 15-ka bisha diseembar ee sannadka 2017, halka sidoo kale la soo gudbin doono mooshin inta aan la gaarin doorashada dalka ka dhici doonta sannadka foodda innagu soo haya 2018.
– Kolka sidaa loo eego waxaa loo howl-gali si degdeg ah, sida uu sheegay Morgan Johansson.
Falkii argagixisada ee ka dhacay magaalada Stockholm wuxuu dib u soo nooleeyay baahida loo qabo xeer hor leh, halka horay talo bixinno hore loogu gaadey inay daldalloolo ka jiraan xeerarka baarista argagixisada.
Waddanka Noorway ayaa leh xeer midkaa la mid ah, waana halka ay dawladda Sweden indhaha ku hayso.
Toddoba ka mid ah siddeeda xisbi ee xubnaha ku leh baarlamanka ayaa sheegay iney u furan yihiin xeer xaaraantimeeynaya xubin-nimada xisbi xag-jir-nimo, sida ku caddaatay baaris ay middaa su’aalo wax kaga weeydiisay laanta wararka ee idaacadda la iska daawado ee SVT.
Dalka Noorway ayuu laga bilaabo sannadkii 2013 uu ka dhaqqan-galay xeer mamnuucaya ka mid ahaanshaha urur ku shaabadeey-san xag-jir-nimo. Halka aanay dalka Sweden suurtagal ka ahayn xeer midkaa u dhigma iyada oo uu adkeeynayo xeerarka xoriyadda ururrada.
- Daldalloolada xeerarka argagixisada ee la sheegay in la damac-san yahay baaris in lagu sameeyo sidii loo dabooli lahaa ayuu Morgan Johansson (S) sheegay in aan la ogeeyn sidii uu u hor-is-taagi lahaa dhacdadii jimcadii ina dhaaftay magaalada Stockholm ka dhacday, hase yeeshee uu sababi kari lahaa in dad inta iminka ka badan lagu qaadi lahaa, middaasina oo yareeyn lahayd dadyowga ku fekera falalka argagixisada, sida uu sheegay.
Wasiirka shuruucda Morgan Johansson (S) ayaa axaddii horay u sheegay inuu ku fekeri karo xeer u dhigma xeerka dalka Noorway.